iPhone 7 kuvhurwa, maficha uye mitengo  Apple | IPhone nhau
Zvishoma nezvishoma, nhau dzine chekuita ne iyo iPhone 7, Apple ramangwana Smartphone iyo haisati yave nezuva rekuburitsa. Zvichakadaro isu tiri kutarisira mashandiro matsva, hunhu uye ekutanga masiketi anoonekwa pane terminal ramangwana kubva kukambani yeCupertino.
Nhau nezve iPhone 7
Apple inoyeuka zvese zviri zviviri iPhone 7 uye iPhone 8 kubva kumusika weGerman nekuda kweQualcomm
Kurwa kuri kuitwa neApple neQualcomm zvinoita sekunge parizvino kuri kure nekuguma. Kutanga yaive China, uyo ...
Dare reMunich rinorambidza kutengeswa kweiyo iPhone 7 ne8 kuGerman
Yekutanga kurova kwaQualcomm muhondo yekurwisa Apple yekutyorwa kwepatent. Mune ino kesi, pamwe nepatinogona ...
Attention, kana iwe uine iPhone 7 iwe ungatofanira kugadzirisa maikorofoni
Apple inoita kunge isinga bvise matambudziko epamusoro, uye hazvigoneke kugadzira zvigadzirwa zvakakwana ... Imwe yeakanyanya ...
Uye ndeyekuti michina yeApple haimire uye kwemazuva mashoma vashandisi vanogara mu ...
kubudikidza Ruben gallardo inoita 4 makore .
Muna 2016 pakanga paine zvimwe zviitiko zvevashandisi veiyo itsva iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ...
Iyo iPhone 7 Plus yanga iri yechipiri inonyanya kufarirwa smartphone muChina panguva ya2017
Musika we smart mobile kuChina wakaoma: vagadziri vazhinji munyika vagadziri vakuru venzvimbo dzinonakidza….
NAB inosimbirira kuti Apple ishandise iyo FM machipisi emidziyo yayo
Chirevo chazvino kubva kuvakomana vanobva kuCupertino maererano nechikumbiro cheNational Association of Broadcasters (NAB) ...
Yako iPhone inogona ikozvino kuchaja isina waya nekuda kweMophie's Charge Force
kubudikidza louis padilla inoita 5 makore .
Iyo iPhone nyowani pakupedzisira inosanganisa waya isina waya, sezvataigona kuona mune yekupedzisira Keynote kubva kuApple. Zvakawandisa…
iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus Zvakakodzera here shanduko?
Mharidzo yeChipiri yekupedzisira, Gunyana 12, yakasiya vashandisi vazhinji vachitonhora zvikuru. Iwo matsva maficha awakatambira ...
kubudikidza Miguel Hernandez inoita 5 makore .
Iyo iPhone 7 Jet Nhema yaive imwe yemafoni ayo akanyanya kutibata muKeynote yekupedzisira ye ...
Apple inobvisa iyo iPhone 7 (PRODUCT) RED kubva kumusika
Iyo tsvuku iPhone yaive yeruzivo rwechokwadi gore rino, uye yaive vara iro vashandisi vazhinji ...